မင်းရဲ့ Organic Search (SEO) စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲ Martech Zone
စာမျက်နှာသန်းပေါင်းများစွာရှိသော mega ဆိုက်များမှ ecommerce ဆိုက်များသို့အသေးစားနှင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအထိ site အမျိုးအစားတိုင်း၏ organic စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်အစီရင်ခံရန်ကျွန်ုပ်ကူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်ပုံသည်မထူးခြားဟုကျွန်ုပ်မယုံပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုထက်ပိုမိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရှိသည်။SEO ဆိုသည်မှာ) အေဂျင်စီ ကျွန်ုပ်၏ချဉ်းကပ်ပုံသည်မခက်ခဲပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်ကိရိယာများနှင့်ပစ်မှတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုအသုံးပြုသည်။
Organic Search Performance Monitoring အတွက် SEO Tools များ
Google Search ကို Console - Google Search Console (ယခင်က webmaster tool များဟုလူသိများသည်) ကို organic ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏မြင်နိုင်စွမ်းကိုစောင့်ကြည့်ရန်ကူညီပေးမည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားပါ။ Google Search Console သည်သင်၏ site နှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးသင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစောင့်ကြည့်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ငါ logged in လုပ်ထားတဲ့ google users တွေအတွက်အချက်အလက်အပြည့်အစုံမပေးတဲ့အတွက်ငါအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြောခဲ့တယ်။ ထို့အတူငါပေါ်လာပြီးပျောက်သွားသော console တွင်မှားယွင်းသောအမှားအချို့ကိုငါတွေ့ပြီးပြီ။ ထို့အတူအချို့သောအမှားများသည်သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိသိသာသာမထိခိုက်ပါ။ Google Search Console ပြသနာများကိုရွေးခြင်းသည်အချိန်များစွာကုန်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သတိထားပါ။
Google Analytics - Analytics သည်သင့်အားအမှန်တကယ်ဧည့်သည်အချက်အလက်များပေးလိမ့်မည်၊ သင်၏ ၀ င်ရောက်လည်ပတ်မှုအရင်းအမြစ်များကိုစောင့်ကြည့်ရန် ၀ ယ်ယူအရင်းအမြစ်များဖြင့်တိုက်ရိုက်ခွဲနိုင်သည်။ ၎င်းကိုနောက်ထပ်အသစ်များနှင့်ပြန်လာသောဧည့်သည်များအားထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။ search console ကဲ့သို့၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဂူးဂဲလ်သို့ log in ဝင်သောသုံးစွဲသူများ၏ဒေတာကိုမပြသပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ဒေတာများကိုသော့ချက်စာလုံးများ၊ ရည်ညွှန်းရင်းမြစ်များသို့ဖြိုဖျက်သောအခါသင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အစုငယ်တစ်ခုသာရရှိသည်။ လူများစွာသည် Google သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်သင့်အားလမ်းလွဲစေနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်စီးပွားရေး - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ (SERP များ) ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြော်ငြာများ၊ မြေပုံအထုပ်နှင့်အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များအားသီးခြားကဏ္ areas သုံးခုခွဲထားသည်။ မြေပုံအထုပ်ကို Google Business ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမင်းရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်း (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း)၊ မင်းရဲ့စီးပွားရေးအချက်အလက်များရဲ့တိကျမှု၊ မင်းရဲ့ပို့စ်တွေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအကြိမ်ရေတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ လက်လီစတိုး (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်စေပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်၎င်းတို့၏ Google Business profile အားအလွန်မြင်သာထင်သာရှိစေရန်ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရပါမည်။
YouTube ချန်နယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - YouTube သည်ဒုတိယအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးထိုနေရာတွင်ရှိနေရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ တစ်တန်ရှိပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားများ သင်၏လုပ်ငန်းသည်ဗီဒီယိုများသို့ organic traffic နှင့် YouTute မှသင်၏ site သို့ရည်ညွှန်းသော traffic ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင့်သည်။ ဗွီဒီယိုများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်၏ဧည့်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်ကိုပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ စာမျက်နှာတစ်ခု (သို့) ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်အချက်အလက်များစွာကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုတန်ဖိုးထားသောဧည့်သည်များကိုအမြတ်ထုတ်ရန်စီးပွားရေး ၀ က်ဆိုက်တစ်ခုစီ၏သက်ဆိုင်ရာဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။
SEMrush - ကြီးမြတ်အတော်လေးရှိပါတယ် SEO ဆိုသည်မှာ tools များ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရန်အပြင်တွင်ရှိသည်။ ငါ SEMrush ကိုသုံးခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာပြီ၊ ဒါကြောင့်မင်းကိုအခြားသူတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုလွှဲဖို့ငါမကြိုးစားဘူး ... ငါမင်းကိုနားလည်တယ်ဆိုတာသေချာချင်တယ်။ ရှိရမည် သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမှန်တကယ်စောင့်ကြည့်ရန်ဤကိရိယာများကိုသုံးပါ။ browser တစ်ခုဖွင့်ပြီး search engine ရလဒ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်လျှင် (SERP များ) သင်စိတ်ကြိုက်ရလဒ်များကိုရရှိသည်။ သင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သီးသန့်ပြတင်းပေါက်မှမဖွင့်လျှင်ပင်သင်၏တည်နေရာသည် Google ၌သင်ရရှိသောရလဒ်များကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာငါတွေ့ရတတ်တဲ့အမှားတစ်ခုကသူတို့က log in ဝင်ပြီးသာမန်ဧည့်သည်တွေနဲ့အများကြီးကွာခြားစေမယ့်ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်တွေကိုပေးမယ့် search history တစ်ခုရှိတယ်။ ဤကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်လည်းအခြားနတ်ကတော်များကဲ့သို့ပေါင်းစည်းရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီနိုင်သည် ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ငွေရတတ်သောသူအတိုအထွာ သင်၏မြင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်သင်၏ site သို့
Organic Traffic ကိုထိခိုက်စေသော External Variables များ
သက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်မြင့်မားသောမြင်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်း 'ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ SEO သည်အမြဲမရှိသောအရာမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် ပြီးပြီ... အဲဒါစီမံကိန်းမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်? မင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ variables တွေကြောင့်
သတင်း၊ လမ်းညွှန်များနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့အဆင့်သတ်မှတ်ရန်သင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သောဆိုဒ်များရှိသည်။ သူတို့ကသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်ရင်အဲဒါကသူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတွေ၊ စပွန်ဆာတွေဒါမှမဟုတ်အထင်ကရနေရာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပရိသတ်တွေကို ၀ င်ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာ Yellow Pages ဖြစ်သည်။ Yellow Pages သည်သင်၏ site တွင်တွေ့နိုင်သောရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုအနိုင်ရလိုသောကြောင့်သင်၏မြင်သာမှုကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်းတို့အားငွေပေးခိုင်းသည်။
မင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိတယ်။ သူတို့သည်သင်ယှဉ်ပြိုင်နေသောသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုများအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်၎င်းတို့နှင့်အကြောင်းအရာနှင့် SEO တွင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၊ algorithmic အဆင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်စမ်းသပ်မှုများရှိသည်။ Google သည်သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အရည်အသွေးရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုသေချာစေရန်အမြဲတစေကြိုးစားနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်နေ့တွင်ရှာဖွေမှုရလဒ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ရှုံးနိမ့်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရှာဖွေရန်လမ်းကြောင်းများရှိသည်။ သော့ချက်စကားလုံးပေါင်းစပ်မှုများသည်အချိန်နှင့်အမျှကျော်ကြားမှုကိုမြင့်တက်စေပြီးကျဆင်းစေနိုင်ပြီးဝေါဟာရများသည်လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာသင်ဟာ HVAC ပြုပြင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်ပူအိုက်သောရာသီဥတုနှင့်အေးသောရာသီ၌မီးဖိုပြဿနာများတွင် AC ကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်လိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်၏တစ်လထက်တစ်လအသွားအလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအခါဧည့်သည် ဦး ရေသည်သိသိသာသာလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားနိုင်သည်။
သင်၏ SEO အေဂျင်စီ (သို့) အတိုင်ပင်ခံသည်ဤဒေတာကိုတူးဆွပြီးဤပြင်ပကိန်းရှင်များကိုစိတ်ထဲတွင်သင်တိုးတက်နေသည်ဖြစ်စေမဟုတ်အမှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်သည်။
လူတို့သည်စာမျက်နှာ ၁ တွင်သင့်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုပြောသော SEO ကွင်းပြင်ကိုသင်ရဖူးသလား။ အိုး ... အဲဒီအသံဖိုင်တွေကိုဖျက်ပြီးသူတို့ကိုနေ့အချိန်မပေးပါနဲ့။ မည်သူမဆိုထူးခြားသောအသုံးအနှုန်းအတွက်စာမျက်နှာ ၁ တွင်မည်သူမဆိုအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များကိုမောင်းနှင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမှန်တကယ်ကူညီပေးသောအရာသည်အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သော၊ သက်ဆိုင်သောအသုံးအနှုန်းများဖြင့်သင်၏ site သို့အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူကို ဦး တည်စေသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သော့ချက်စာလုံးများ မင်းမှာထူးခြားတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်၊ ထုတ်ကုန်နာမည် (သို့) မင်းရဲ့ဝန်ထမ်းနာမည်တောင်ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ site ထဲကိုမင်းဘယ်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဘဲရှိပါစေအဲဒီရှာဖွေရေးစာလုံးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါကပိုကောင်းတဲ့အဆင့်မှာ Martech Zone... အဲဒါကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ငါ့ဆိုဒ်အတွက်တော်တော်ထူးခြားတဲ့နာမည်ပဲ။ မင်းရဲ့အဆင့်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်တွေမဟုတ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်သော့ချက်စာလုံးတွေကိုသီးခြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်တယ်။
သော့ချက်စာလုံးများပြောင်းခြင်း -အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောသော့ချက်စာလုံးများအားလုံးသည်လည်းအရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ဆိုဒ်ကစာလုံးရေရာနဲ့ချီပြီးအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ကမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ traffic တွေကိုမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ဘာကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာလဲ။ ငါတို့ကကုမ္ပဏီကကမ်းလှမ်းတဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်တာကြောင့်ငါတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိသိသာသာလျှော့ချရင်းသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေသိသိသာသာလျော့ကျသွားတဲ့အခါမှာငါတို့က SEO တာဝန်တွေကိုယူထားတယ်။
သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများ - ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိကကျသောမဟာဗျူဟာ အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် သင်၏ဧည့်သည်များကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ဧည့်သည်အားလုံး ၀ ယ်သူတစ် ဦး အဖြစ်သို့မရောက်နိုင်သော်လည်းအကြောင်းအရာတစ်ခုတွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေသောစာမျက်နှာဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏နာမည်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အွန်လိုင်းအသိကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆိုဒ်နှင့်အကြောင်းအရာများတွင်သိန်းနှင့်ချီ။ ရင်းနှီးခဲ့သောဖောက်သည်အသစ်ရှိသည် ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့်ဆိုဒ်မှပြောင်းလဲခြင်းများမရှိခဲ့ပါ။ အကြောင်းအရာအများစုသည်၎င်းတို့၏တိကျသော ၀ န်ဆောင်မှုများဆီသို့ ဦး တည်။ ပင်မရ ... သူတို့ကသူတို့မပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စာသားအတိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အားစိုက်ထုတ်ရကျိုးနပ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ဆီကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပရိသတ်အတွက်အသုံးမ ၀ င်တာကြောင့်အဲဒီအကြောင်းအရာကိုငါတို့ဖယ်လိုက်တယ်။
ရလဒ်များ? သော့ချက်စာလုံးများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နည်းသည် တိုးမြှင့်လာသည် သက်ဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်း၌
သင်၏ site သည် web ၏သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်၍ ရွေ့လျားနေစဉ်လတိုင်းအတက်အဆင်းရှိလိမ့်မည်။ ငါကငါ့ဖောက်သည်တွေအတွက်ချက်ချင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့အသွားအလာကိုဘယ်တော့မှအလေးထားတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်။
အချိန်နှင့်အမျှရာထူးအလိုက်သော့ချက်စာလုံးအရေအတွက် - စာမျက်နှာအဆင့်တိုးလာခြင်းသည်အချိန်နှင့်အရှိန်လိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့စာမျက်နှာရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမြှင့်တင်တဲ့အခါ၊ အဲဒီ့စာမျက်နှာကိုမြှင့်တင်ပြီးမင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုလူတွေဝေမျှရင်မင်းရဲ့အဆင့်အတန်းကတိုးလာလိမ့်မယ်။ စာမျက်နှာ ၁ ရှိထိပ်ဆုံး ၃ နေရာသည်အမှန်တကယ်အရေးပါသော်လည်းထိုစာမျက်နှာများသည်စာမျက်နှာ ၁၀ မှပြန်စလာနိုင်သည်။ ငါ site ၏စာမျက်နှာများအားလုံးကိုစနစ်တကျအညွှန်းကိန်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆက်လက်တိုးတက်စေရန်သေချာစေလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအလုပ်များသည်လနှင့်ချီ။ ငွေလွှဲခြင်း၌ပင်မပြီးနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကသူတို့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရွေ့နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအမြင်အာရုံပြနိုင်သည်။ အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များတွင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောသက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ခွဲရန်သေချာပါစေ။
လစဉ်အော်ဂဲနစ်လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက် - သင့်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများအတွက်ရာသီအလိုက်လမ်းကြောင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်သင်၏ site သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ (အသစ်နှင့်ပြန်လာသူ) ကို ၀ ယ်သူ ဦး ရေကိုကြည့်ချင်သည်။ ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းများသည်တစ်လနှင့်တစ်လတူညီနေလျှင်ဧည့်သည်အရေအတွက်တိုးလာသည်ကိုသင်မြင်ချင်လိမ့်မည်။ ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းများပြောင်းသွားလျှင်ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းများရှိနေသော်လည်းသင်ကြီးထွားလာသလားဆိုသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်မင်းရဲ့ဧည့်သည်အရေအတွက်ကမလျော့ဘူးဆိုပေမယ့်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးတွေရဲ့ရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းတွေကကျဆင်းနေတယ်။
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လစဉ်အော်ဂဲနစ်လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက် - သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများအတွက်ရာသီအလိုက်လမ်းကြောင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်၏ site မှရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ (အသစ်နှင့်ပြန်လာသူ) ၀ ယ်သူ ဦး ရေကိုကြည့်ချင်လိမ့်မည်။ ရာသီဥတုသည်လုပ်ငန်းအများစုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ယခင်လနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလစဉ်သင်၏ဧည့်သည်အရေအတွက်အားဆန်းစစ်ခြင်းသည်သင်တိုးတက်နေသည်လား (သို့) ပိုကောင်းအောင်လုပ်မည့်အရာများကိုကြည့်ရန်လိုသလားဆိုသည်ကိုကြည့်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အော်ဂဲနစ်အသွားအလာမှပြောင်းလဲခြင်းအရေအတွက် - သင်၏အတိုင်ပင်ခံ၏အေဂျင်စီသည်လမ်းကြောင်းအမှန်နှင့်လမ်းကြောင်းများကိုအမှန်တကယ်စီးပွားရေးရလဒ်များသို့မလိုက်လျောလျှင်၎င်းတို့သည်သင့်ကိုကျရှုံးစေသည်။ လုပ်ရတာလွယ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၀ ယ်သူခရီးသည်မသန့်ရှင်းပါ ရောင်းအားကတော့ ငါတို့စိတ်ကူးချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောဖုန်းနံပါတ် (သို့) ၀ က်ဘ်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုအရင်းအမြစ်တစ်ခုနှင့်မချိတ်နိုင်ပါကထိုအရင်းအမြစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်သောစံလုပ်ငန်းစဉ်များတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားတွန်းအားပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာဖောက်သည်အသစ်တစ်ယောက်စီကိုသူတို့အကြောင်းဘယ်လိုကြားလဲမေးတဲ့မေးရိုးတစ်ခုရှိတယ်။ အများစုကအခု Google ကိုပြောနေတယ်။ အဲဒါက map pack နဲ့ SERP ကိုမခွဲခြားဘဲ၊ ငါတို့နှစ်ခုစလုံးအတွက်ငါတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာငါတို့သိပါတယ်။
ပြောင်းလဲခြင်းများအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းသည်လည်းသင့်အားကူညီပေးသည် ပြောင်းလဲမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ! တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ ကလစ်ခေါ်ဆိုခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောပုံစံများနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပိုပိုပြီးတွန်းပို့နေပါသည်။ ၎င်းသည်ပိုမို ဦး ဆောင်သူနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းများကိုမမောင်းနှင်လျှင်အဘယ်အရာကို အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့်ပြီးသင်၏အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုကြီးထွားစေသနည်း။
အကယ်၍ မင်းကအခုဆိုရင်အော်ဂဲနစ်ဧည့်သည်ကို ၀ ယ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ရင်သူတို့ကဖောက်သည်တွေကိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်ပြုစုပျိုးထောင်နည်းဗျူဟာတွေကိုဖြန့်ကျက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းလွှာများကိုနှစ်သက်သည်၊ လှုံ့ဆော်မှုများကျဆင်းပြီးဧည့်သည်အသစ်များပြန်လာရန်ဆွဲဆောင်ရန် sign-ups များကမ်းလှမ်းသည်။
စံ SEO အစီရင်ခံစာများသည်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်
ငါစံတင်ပြချက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အထက်ပါပလက်ဖောင်းများကိုမသုံးပါဟုရိုးသားစွာပြောပါမည်။ ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုကမှတူတာမဟုတ်ဘူး။ ပြိုင်ဘက်ဆိုဒ်တွေကိုအတုခိုးတာထက်ငါတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုဘယ်လိုအရင်းအနှီးလုပ်ပြီးကွဲပြားအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပိုအလေးထားချင်တယ်။ သင်သည် hyperlocal ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်ဥပမာ၊ သင်၏နိုင်ငံတကာရှာဖွေမှုအသွားအလာတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလား။ မင်းကအခွင့်အာဏာမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုဆိုရင်မင်းကမင်းကိုထိပ်တန်းရှာဖွေမှုရလဒ်တွေကိုအနိုင်ရတဲ့ဆိုက်တွေနဲ့မင်းကိုမယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ သို့မဟုတ်သင်ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်ရှိသောအသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင်ဒေါ်လာတစ်သန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိကြောင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဖောက်သည်တစ် ဦး စီ၏ဒေတာများကိုစစ်ထုတ်ရန်၊ ခွဲရန်လိုအပ်ပြီးသူတို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့် ၀ ယ်သူသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အချိန်နှင့်အမျှသူတို့၏ site ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့အေဂျင်စီဒါမှမဟုတ်အတိုင်ပင်ခံကမင်းရဲ့လုပ်ငန်း၊ မင်းဘယ်သူကိုရောင်းလဲ၊ မင်းရဲ့ခြားနားချက်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးအဲဒါကိုအရေးကြီးတဲ့ဒက်ရှ်ဘုတ်တွေ၊
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ပေါ့ SEMrush ပြီးတော့ငါဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ရဲ့တွဲဖက် link ကိုသုံးနေတယ်။
Tags: branded သော့ချက်စာလုံးများသော့ချက်စာလုံးများကိုပြောင်းထားသည်analytics googleဂူဂဲလ်စီးပွားရေးသော့ချက်စာလုံးအနေအထားkeyword အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သော့ချက်စာလုံးအဆင့်သော့ချက်စာလုံးတွေအမှတ်တံဆိပ်မပါသောသော့ချက်စာလုံးများအော်ဂဲနစ်ပြောင်းလဲမှုများအော်ဂဲနစ်အသွားအလာorganic traffic variables များအော်ဂဲနစ်ဧည့်သည်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationရှာဖွေရေးဝေါဟာရများsemrushseoseo စွမ်းဆောင်ရည်seo ကဖော်ပြသည်seo tools များyoutube ကYouTube ချန်နယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းYouTube ရှာဖွေမှု